China mbupụ 2020 ọhụrụ akuku ọhụrụ apụl mkpụrụ ya na ezigbo ọnụahịa ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ngwaahịa | AGR
1.Apple bụ mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ, nke a na-eri eri nke osisi Malus domestica. Ọ bụ mkpụrụ osisi gbara gburugburu nke nwere ike ịbe nha na agba dị iche iche
dị ka odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ọbara ọbara. Apụl na-adịkarị ụtọ ma na-eri cam dị ọhụrụ ma ọ bụ jiri ya na nri, ihendori, gbasaa, ihe ọ juụ .ụ ma ọ bụ
ọwọrọetop apụl achịcha. Mkpụrụ nke apụl nwekwara ike gwerie iji wepụta mmanụ, nke a na-eji na ụlọ ọrụ ịchọ mma. Mkpụrụ osisi nwere ọtụtụ carbohydrates, sugars na fiber na-eleghara anya nke protein na abụba.
Nkọwa ngwaahịa ：
Ejiri apụl 2.ji Fuji buru ibu, na-acha uhie uhie na gburugburu, na gburugburu ya na ọkara dịka baseball. 9-11% nke ịdị arọ nke mkpụrụ osisi ahụ bụ monosaccharides, anụ ahụ ya dịkwa oke, na-atọ ụtọ ma sie ike karịa ọtụtụ ụdị apụl ndị ọzọ, ya mere ndị ahịa n'ụwa niile hụrụ ya n'anya nke ukwuu.
E jiri ya tụnyere apụl ndị ọzọ, apụl Fuji nwere ogologo oge kachasị mma tupu ụbọchị ma ọ dịghịdị mkpa ịchekwa ya na friji. Enwere ike ịchekwa ya ruo ogologo oge na ụlọ okpomọkụ. Ọ bụrụ na apụl etinye na 5% nnu mmiri maka nkeji 10, kpọrọ nkụ, tinye n'ime akpa nchekwa, mechie ma tinye n'ime friji, a na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ na 0-40 ℃, enwere ike ịchekwa ya karịa ọnwa 5 .
Mkpụrụ osisi apụl na-atọ ụtọ ma na-amị amị bụ otu n'ime mkpụrụ osisi ndị kacha ewu ewu ma nwee mmasị na ya n'etiti ndị maara ahụike, ndị nwere ahụ ike, ndị kwenyesiri ike n'echiche bụ "ahụike bụ akụnụba." Mkpụrụ osisi a magburu onwe ya jupụtara na phyto-nri na, n'eziokwu, dị oke mkpa maka ahụike kacha mma.
Mkpụrụ osisi apụl na-atọ ụtọ ma na-amị amị bụ otu n'ime mkpụrụ osisi ndị kacha ewu ewu ma nwee mmasị na ya n'etiti ndị maara ahụike, ndị nwere ahụ ike, ndị kwenyesiri ike n'echiche bụ "ahụike bụ akụnụba." Mkpụrụ osisi a magburu onwe ya jupụtara na phyto-nri na, n'eziokwu, dị oke mkpa maka ahụike kacha mma. Antfọdụ ọgwụ ndị na-egbochi ọgwụ na apụl nwere ọtụtụ nkwalite ahụ ike na ihe ndị na-egbochi ọrịa, ma si otú a na-eme ka okwu ahụ ziri ezi kwuo, “mkpụrụ apụl kwa ụbọchị na-eme ka dọkịta ghara ịla.”
Osote: China N'ogbe High Quality Mpi Price Red ọhụrụ Apple
China N'ogbe High Quality Mpi Price ...